Falanqeynta Kulamada Caawo dhaci doona ee Champions League. | Warfaafiye
Warfaafiye Arrimaha Bulashada	Falanqeynta Kulamada Caawo dhaci doona ee Champions League.
Dec 4th, 2012 – by ilkacase0
(Sports News) Waxaa caawo la filyaa in aay dhacaan lugtii ugu danbaysay ee Kulamada Guruubyada Kooxaha ku loolamaya koobka Champion League ah waxaana caawo la filayaa in kulma xisa badan ay dhaxmaraan Kooxaha ku jira Guruubyada A,B,C,D .
Kulan xiisa badan oo loo tartamaya kaalinta kowaad ayaa caawo gurubkaa ku dhaxmari doona Labada Koxood ee FC Porto iyo Kooxda PSG waaxana kulan kaa uu ka dhici doonaa garoonka Kooxda PSG oo martigalinaysa Kulan kaa.
Isla gurubkaa waxaa ku balan san labada koxood ee ka kala socda Dalalka Ukrine iyo Coartia waxana kulan xiisa badan labad koxood ee Dynamo Kiev iyo kooxda kale Dinamo Zagreb waaxna kulan kaa uu ka dhci doonaa guriga Kooxda Dinamo Zagreb.
Kulan asna xiisa badan oo kaalinta kowaad loo dagaalamayo ayaa waxaa uu gurubkaa ku kala dhaxamari doonaa Kooxaha Arsenal iyo Shalka inkastoo labadooda ay laba Koxood oo aad u adag la ciyaarayaan waxana Kooxda Arsenal marti u tahay Kooxda reer Gareec ee Olympiakos waaxna kulan kaa uu yahay mid Kooxda Arsenal laga sugayo in aay kaalinta kowaad ku soo baxdo .
Arsenal ayaa kulan kaan la sheegay in aay ka tagtay Xidiga waa wayn oo kooxda laf dhabar u ahaa waxna xidigahaa ka mid ah Arteta ,Wilsher, Iyo ciyaartoy kale oo muhiim ahaa waxana la filayaa in kulan kaa caawo Arsenal kaalinta kowaad u dagaalanto .
Isla Gurubkaa waxaa ku kulmaya Kooxda Shalka iyo Kooxda Montpellier waaxna kulan kaaa qudhiisa uu yahay mid xiisa xoogan xanbaarsan waaxana kulan kaa uu yahay mid Shalka aay ku dagaalami doonoto in hugaanka sii hayso guruubka .
Malaga ayaa xaqiijisan doonta kaalinta koowaad ee Group C marka ay caawa la kulmaan kooxda Anderlecht oo u dagaalameysa booska Europa League waaxana Kooxda Malaaga kulamadii u danbeeyay soo wajahay guul darooyin is xig xiga laakiin waxaa aay goor hore xaqiijisatay in aay soo baxday .
Malaga iyo AC Milan ay iska xaadiriyeen wareega 16ka Champions League, kooxda Malaga ayaa ku cadcad kaalinta koowaad, madaama Milan ay kulankeeda ugu danbeeya wareega group-ka ay ciyaareyso iyadoo seddex dhibcood ka danbeysa kooxda reer Spain.
Isla Gurubka waxaa isku haysta Kooxda Zenit St Petersburg ayaa u baahnaan doonta inay dhibco ka helaan AC Milan si ay uga sarro maraan Anderlecht oo u xaqiijistaan booskooda Europa League.
Labada boos ee ugu sareeya Group-kaan waa la go’aansaday, laakiin weli waxaa mugdi ku jiraa cidii u gudbi lahayd Koobka labaad ee Europa League waxana caawo Gurubkaa kulmada dhacaya yihiin kuwa aad u xiisa badan .
Kooxda heysata horyaalka Bundesliga Borussia Dortmund ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad, halka kooxda heysata horyaalka Spain ay ku soo baxday kaalinta labaad, si kastaba booska Europa League ayaan weli la go’aansan.
Kooxda Man city ayaa guunta dhiisa iskaga xiri doonta Kulan Kooxda bundisleag ka socota ee Borussia Dortmund isku arki doonaan inakstoo kulan koodii hore bar baro soo galeen waxaana kulan kaa uu yaahy mid aad u adag.
W/Q.Cabdi raxmaan ilkacase